မေဖလိုင်းပိုးကောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မစ္စစ္စပီမြစ် တစ်နေရာတွင် မေဖလိုင်းကောင်လေးများ ပေါက်ဖွားနေကြသည်ကို မိုးလေဝသရေဒါမှတဆင့် မြင်ရပုံ
မေဖလိုင်းပိုးကောင် (Mayflies) ဆိုသည်မှာ မျိုးစဉ် အပ်ဖမ္မရော့ပ်တဲရာတွင် ပါဝင်သော အင်းဆက်မျိုးကွဲအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုခေါ်ဝေါ်သည့် အမည်ဖြစ်ပြီး မူရင်းဘာသာစကားမှာ ဂရိဖြစ်ကာ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် (ဂရိ: ephemeros, translit. အပ်ဖမ္မရိုစ်, lit. "ပေါ်ပင် (သို့) သက်တမ်းတို" ၊ ဂရိ: pteron, translit. တဲရွန်, lit. "တောင်ပံ") ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ၎င်းအမည်၏အဓိပ္ပါယ်သည် အရွယ်ရောက်ပြီးအကောင်များ၏ အထူးခြားဆုံးသော အင်္ဂါရပ်များကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်လေသည်။ မေဖလိုင်းများသည် ရှေးခေတ်အင်းဆက်အုပ်စုဖြစ်သည့် Palaeoptera ('ရှေးဟောင်းအတောင်များ') ထဲတွင် ပုစဉ်းများနှင့် ဒမ်ဆယ်ဖလိုင်းပိုးကောင်များနှင့်အတူ ပါဝင်သည်။ 
မေဖလိုင်း မျိုးရင်း ၄၂ မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲရှိ မျိုးစု ၄၀၀ ကျော်ဖြင့် မျိုးစိတ် စုစုပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
၁ သားဥ ဘဝ
၂ ပိုးလောင်း (သို့) ပေါက်ဖတ် ဘဝ
၃ အရွယ်ရောက် ဘဝ
မိတ်လိုက်သောအခါ၌ မေဖလိုင်း အမများသည် ဥများကို ရေထဲသို့ ဥချလေသည်။  ထိုဥများဟာ ကျောက်ဆောင်အောက်ခြေနှင့် ရေစီးကြောင်း၏ အောက်ခြေနားတွင် တွယ်ကပ်နေလေ့ရှိ၏။ မေဖလိုင်း မျိုးစိတ်အလိုက် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ မျိုးဥများကြီးထွားရန် ရက်အနည်းငယ်မှ တစ်နှစ်အထိကြာတတ်သည်။ မျိုးစိတ်အများစုသည် အများအားဖြင့် တစ်လမှ သုံးလအထိ ကြာလေ့ရှိသည်။  သန္ဓေသားအဆင့်၌ မေဖလိုင်းသားလောင်းများသည် ပါးစပ်၊ ခြေထောက်၊ အမြီး စသည့်အင်္ဂါများအားလုံး ဖွံ့ဖြိုးလာလေသည်။ 
ပိုးလောင်း (သို့) ပေါက်ဖတ် ဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
မေဖလိုင်းသည် ရေနေသားလောင်းဘဝတွင် ရေချို၌ လပေါင်းများစွာမှ တစ်နှစ်အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သည့် အင်းဆက်များဖြစ်ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ အပေါ်ယံ အခွံမာများလဲလှယ်လေ့ရှိရာ အများအားဖြင့် အကြိမ် ၂၀ (သို့) ၃၀ ခန့်လဲကြလေ့ရှိသည်။
မေဖလိုင်းများသည် ပျံသန်းရန် အတောင်ပံများရရှိပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထပ်၍ အတောင်ပံလဲခြင်းကြောင့် အခြားအင်းဆက်များထက် ထူးခြားနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို alate stage ဟုခေါ်လေသည်။ ဤဒုတိယအကြိမ်မြောက် နောက်ဆုံးအဖြစ်ပေါက်သော အတောင်ပံသည် ပြောင်းလဲချိန်သည် မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်၍ မိနစ် ၃၀ မှ တစ်ရက်အထိ ကြာတတ်သည်။ မေဖလိုင်းများ၏ အရွယ်ရောက်ဘဝသည် မျိုးပွားခြင်းနှင့် နေရာဒေသပျံ့နှံ့ခြင်းတို့အတွက်သာ အဓိကဖြစ်လေဖြစ်သည်။ ဤဘဝအဆင့်သည် ငါးများစွာ၏ အနှစ်သက်ဆုံး အစားအစာဖြစ်ပြီး များစွာသော 'အင်းဆက်စား ငါးမျှား' သည် ၎င်းတို့ပြောင်းလဲချိန်၌ ရောက်လာလေ့ရှိသည်။
သားလောင်း အားလုံးသည် တစ်ပြိုင်နက် အကောင်ပေါက်လေ့ ရှိကြသည်။ ကာလအားဖြင့် နွေဦး သို့မဟုတ် ဆောင်းဦးတွင် တစ်ရက် (သို့) နှစ်ရက်ခန့် ၎င်းသားလောင်းများ ဥချထားရာ နေရာတိုင်း၌ အကောင်ပေါက်များသည် အုပ်စုကြီးများဖြင့် တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ အရွယ်ရောက်သော မေဖလိုင်းကောင်များတွင် ထူးခြားချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့၏အနောက်ဘက်အတောင်များသည် သေးငယ်သည် သို့မဟုတ် မမြင်ရသလောက် နီးပါးသေးငယ်လေ့ ရှိသည်။ အထီးများတွင် ရှေ့ခြေနှစ်ချောင်းရှည်လျားပြီး အမများကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ထိုထက်ပိုသော အခြားလုပ်ဆောင်မှုမရှိပေ။ မိတ်လိုက်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် လေထဲတွင်ပျံဝဲရင်းသာ ပြီးမြောက်လေ့ရှိသည်။ မေဖလိုင်းပိုးကောင်များ သည် အတော်ပင် အောင်မြင်သော သတ္တဝါအဖွဲ့ဟု ပြောဆိုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြောက်အမေရိကမှ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆၃၀ ခန့်အပါအဝင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ တွေ့ရှိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
↑ Hoell, H. V.; Doyen, J. T.; Purcell, A. H. (1998)။ Introduction to Insect Biology and Diversity (2nd ed.)။ Oxford University Press။ pp. 320, 345–348။ ISBN 978-0-19-510033-4။
↑ They may not beanatural monophyletic group.Trueman J.W.H. 2008. Tree of Life Web Project – . Version of 2008-Mar-20. Retrieved 2008-Dec-15.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Al Caucci; Bob Nastasi; Art Flick; et al., Hatches II: A Complete Guide to the Hatches of North American Trout Streams (Guilford, CT: Lyon's Press, 2004), p. 29
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မေဖလိုင်းပိုးကောင်&oldid=721466" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။